Malunga Nathi-Camei Ele&Stationery Co., Ltd.
Inkampani yethu inomzi-mveliso we-bulit, ogubungele phantse i-12,000 yeemitha zesikwere, enabasebenzi abangaphezu kwama-300, inezixhobo ezahlukeneyo ze-frequency ephezulu kunye nezixhobo zokuthunga, ixesha lokukhokela imveliso ziintsuku ezingama-20-40, umjikelo wokwenza isampulu yi-1- Iintsuku ezi-7, umjikelo wesampulu okhawulezayo unokuba lusuku olu-1 nje ukuba sifumane iimfuno. Kwiminyaka engama-25 edlulileyo, siye sabambelela ngokuqhubekayo kumgangatho kunye nexesha lokuhambisa. Umbono womthengi wethu kukuphumelela kwentsebenziswano kunye nokudalwa ngokudibeneyo kwekamva.Sikholelwa ukuba intsebenziswano yethu ngokuqinisekileyo iya kunceda injongo yakho iqaqambe ngakumbi!
I-Quanzhou Camei Stationery Bag yasekwa ngo-2003, elishishini kunye neshishini lorhwebo, elikhethekileyo kuphuhliso, ukuvelisa, ukuthengiswa kweengxowa kunye nezinto zokubhala. Siphumelele iziqinisekiso ze-ISO9001, BSCI, SEDEX, kunye nophicotho lweenkampani ezininzi ezidumileyo zangaphandle (ezifana neWalmart, i-Ofisi Depot, iDisney, njl.). Iimveliso zethu zenziwa ikakhulu kwi-2: kwi-high-frequency workcraftsship njengeengxowa zokufayilisha, i-ring binder, ibhodi yokunamathisela, isikhwama sepensile, isikhwama sokugcina; kumsebenzi wokuthunga njengepotfoliyo, isibophelelo seziphu, isingxobo sepensile, ibhegi yokuthenga, ibhegi yezithambiso, ibhegi yekhompyuter njl.njl. Inkampani yethu inamandla azimeleyo okuyila nokuphuhlisa, kukho uluhlu olubanzi lweengxowa zokubhala, isitayile esigqwesileyo, umgangatho ophezulu. Ithunyelwe kumazwe amaninzi nakwimimandla efana neYurophu, eUnited States, eJapan, njl.njl. Zifumene igama elihle kakhulu kumazwe ngamazwe.
Ngophuhliso lwe-COVID-19, uqoqosho luyehla. Phantsi kwale meko, amanye amashishini anqumamisa ukusebenza, nangona kunjalo, iCamei ayiqinisekisi nje ukusebenza ngokuqhelekileyo, kodwa sigxile ekuziphuculeni ngokwethu ngophando nokuphuhlisa iimveliso kunye nokuphucula ulawulo lwangaphakathi ukuze kubonelelwe ngenkonzo esebenzayo nebanzi kubathengi emva kobhubhani.
Kwiminyaka yowama-2020, uCamei utyikitye isivumelwano kunye neBeijing Changsong Consulting Co., Ltd. ukubonelela ngoqeqesho olucwangcisiweyo kubo bonke abaphathi abakwinkonzo. Umsebenzi ngamnye wolawulo wabasebenzi uyafunda kwaye ukhule kuqeqesho, uphucula ubuchule bolawulo. yonke into esebenza kakuhle kunangaphambili, umgangatho wabasebenzi uphuculwe.Ukuze sikwazi ukunceda abathengi kwaye sijongane nezinto ezisebenza ngokukhawuleza.